ठूला बैंकहरुको ३० अर्ब ऋण डुब्ने खतरा ! बालुवाटारको लगानी बालुवामा पानी बन्दै « Nepal Bahas
ठूला बैंकहरुको ३० अर्ब ऋण डुब्ने खतरा ! बालुवाटारको लगानी बालुवामा पानी बन्दै
इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र एसबिआई बैंकले गरेका थिए बालुवाटारमा लगानी
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:४३
काठमाडौं । व्यक्तिको नाममा पुगेको बालुवाटारको अधिकांश सरकारी जग्गा बैंकको धितोमा रहेको खुलेको छ । तीव्रगतिमा किनबेच हुँदा सो जग्गा अहिलेसम्म कम्तीमा ३३४ कित्तामा चिरा पारिएको छ । जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा धितो राखेर करिब ३० अर्ब ऋण निकालेका छन् । सरकारले जग्गा रोक्का राखेकाले बैंकको लगानीसमेत संकटमा परेको छ ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सो क्षेत्रको जग्गाको अभिलेख खोज्दै छ । अहिलेसम्म व्यक्तिको नाममा सारिएको ३३४ र सरकारसँग रहेको ८३ कित्ता जग्गा भेटिएको छ । मालपोतले भेटिएको जग्गा रोक्का गरेको छ भने थप जग्गा खोज्दै छ । व्यक्तिका नाममा सारिएका जग्गा रोक्का गर्ने क्रममा बैंकमा धितो राखिएको विवरण पनि खुलेको हो । ‘रोक्का गर्ने क्रममा अधिकांश जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकालेको भेटिएको छ,’ मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’
भूमाफिया आफैँले र उनीहरुमार्फत जग्गा किनेका जग्गाधनीले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका छन् । ठूलो रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एभरेस्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र एसबिआई बैंकबाट निकालिएको मालपोत स्रोतले जनाएको छ । सरकारी जग्गा धरौटी राखेर व्यक्तिले पैसा लिएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर छ । राष्ट्र बैंकले कति जग्गा धरौटीमा राखेर कति रकम निकालिएको छ भन्ने जानकारी नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले अवैध जग्गा धितो राखेर ठूलो रकम ऋण दिइएको भए त्यसले वित्तीय स्थायित्वमै समस्या ल्याउने बताए ।
मालपोतद्वारा ४१७ कित्ता जग्गा रोक्का
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले बालुवाटारको चार सय १७ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ । त्यसमध्ये अवैध रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गा तीन सय ३४ कित्ता छ । मालपोतले सरकारको नाममा रहेको ८३ कित्ता पनि रोक्का गरेको छ । व्यक्तिको नाममा लगिएको तीन सय ३४ कित्ता जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ९९ रोपनी छ । बालुवाटारमा व्यक्तिको नाममा लगिएका अन्य जग्गाको खोजी भइरहेको पनि मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख ०६७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्दा त्यहाँ परेको जग्गाका धनीलाई सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गर्ने निर्णयबमोजिम यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । यसलाई सरकारले ‘दूषित निर्णय’को संज्ञा दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको दूषित निर्णय खारेज गर्न’ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय खारेज गरेसँगै थप कारबाही अघि बढाउन सहज हुने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले देशभरि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोबारे अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने भएको छ । विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका वेला मन्त्रालयले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विष्णु पौडेलको जग्गा पनि रोक्का
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि रोक्का राखेको छ । उनको नाममा दुई कित्ता जग्गा भेटिएको छ । पौडेलको नाममा कित्ता नं. ३१५ मा सात आना दुई पैसा तीन दाम क्षेत्रफल र कित्ता नं. ३०९ मा एक पैसा ०.७० दाम क्षेत्रफलको जग्गा भेटिएको छ ।
शोभाकान्त ढकालसँग जग्गा
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भूमाफियाका रूपमा चर्चा गरिएका पात्र हुन् शोभाकान्त ढकाल । उनी र उनकी पत्नी उमाकुमारी ढकालको संयुक्त नाममा सिट नं. १०२१०२५१४ मा कित्ता नं ८१, ११३, ८६, ७७ र ७९ मा गरी एक रोपनी ६ आना दुई दाम जग्गा छ । त्यस्तै, शोभाकान्त ढकालको नाममा मात्र विभिन्न तीनवटा कित्ता जग्गा छ । उनको कित्ता नं. ४०, १२ र ३७ मा सात आना ३.४८ दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको घडेरी छ । त्यसबाहेक रूपेशकुमार सुवेदी र सरोज ढकालको संयुक्त नाममा दुई रोपनी आठ आना, एक पैसा २.९३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा छ । मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको नाममा कित्ता नं. ८३ मा १३ आना तीन पैसा क्षेत्रफलमा घडेरी छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी भन्छन्–त्यसरी ऋण प्रवाह भएको भए वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्छ । बालुवाटारको विवादास्पद जग्गा धितो राखेर बैंकहरूबाट ठूलो रकम ऋण लिइएको छ भन्ने विषय सुन्नमा आएको छ । तर, के–कति धितोमा राखिएको छ, बैंकले कति ऋण दिएका छन् भन्ने औपचारिक जानकारी आएको छैन । हामीले पनि त्यस विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र रिपोर्टिङ लिने काम गर्न पाएका छैनौँ । तर, सो जग्गा धितोमा राखेर बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह भएको रहेछ भने वित्तीय स्थायित्वमा नै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले त्यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नेछ ।
शोभाकान्त ढकाल र उमाकुमारी ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदी बालुवाटारका जग्गाधनी मात्र होइनन्, त्यही परिसरमा खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका मोही पनि बनेका छन्
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले अहिलेसम्म व्यक्तिको नाममा सारिएको ३३४ कित्ता (९९ रोपनी) र सरकारको नाममा रहेको ८३ कित्ता (३० रोपनी) जग्गाको विवरण पत्ता लगाएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
#मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
२३ वाणिज्य बैंकको रिपोर्ट सार्वजनिकः ३ बैंकको मुनाफा २ अर्बमाथि, कुनको कति ?
एमालेको टिप्पणी : अघिल्लो सरकारको काम नै अहिलेको उपलब्धी, चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप
केएमसी र नोबेल कलेजको ठगी बारे गृहमन्त्रालयमा छलफल, अनुसन्धान गर्ने आश्वासन
अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका बढाउन तीन संस्थाले गरे सहकार्य
सिन्धुपाल्चोकमा गाडी दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते
२३ वाणिज्य बैंकको रिपोर्ट सार्वजनिकः ३ बैंकको मुनाफा २ अर्बमाथि,…
सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्स निःशुल्क
गण्डकी सरकार मेडिकल कलेज चलाउने तयारीमा
आज बजारमा सुनचाँदी तोलामा कति छ ?
म्याग्दी खण्ड दैनिक छ घण्टा बन्द हुने
हुस्सु नफाटेपछि तरकारी खेती गर्ने किसान हैरान
काेराेनाले भन्सार एजेन्टको लिखित परिक्षा पनि स्थगित
काठमाडौंमा विभिन्न क्षेत्रमा तीन व्यक्ति मृत्त फेला
हत्याका प्रतिवादी नौ वर्षपछि पक्राउ
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम